Intengiso kwiYelp? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 23, 2013 NgoMgqibelo, Matshi 23, 2013 Douglas Karr
Kutshanje besincedisa i-masseuse ye-ofisi yethu (ewe-sinayo nyani!) Ithathe isigqibo sokuba ayithengi okanye ayithengi izibhengezo kwiYelp yayilutyalo-mali olulungileyo lokumkhuthaza Spa apha eIndianapolis, Amava eQuiescence. UMonique wayesele ebone ukugcwala kweenyawo ukusuka kubukho bakhe kwiYelp, ke mhlawumbi intengiso kwiYelp inokuvelisa ngakumbi.
Xa uthetha nommeli wentengiso, iipakethe zentengiso zomelele kakhulu. Okokuqala, uMonique uza kufumana intengiso ezinikezelweyo kukhangelo lwasekhaya lweYelp kumashishini afana nawakhe. I-Yelp ayinakuze ikhuthaze elinye ishishini-lelakhe kuphela-kwiphepha leziphumo:
Kananjalo, isibhengezo siza kusebenza kumaphepha oshishino abakhuphisana nawo:
Okokugqibela, i-Yelp iya kuqhuba ngakumbi iintengiso kwizixhobo zefowuni:
Ummeli weYelp wenze umsebenzi omkhulu wokusihamba ngokuma kwabo kwisithuba, bezithelekisa ne Amakhasi aBomvu, Umcebisi wohambo kwaye Uluhlu lukaAngie (umxhasi wethu). Ukuyibona ngamehlo, babonelela ngale tshathi yeGoogle Trends:
Ngokwam, bendicinga ukuba le iyinkohliso. Le tshathi ibonisa ubalo lwenyani lokukhangela iindawo ngokwazo… hayi ukukhangela amagama afana neshishini likaMonique anokufuna. Ukuba uyayenza ukuba ukukhangela ("ukuphulula i-Indianapolis"), iziphumo zophando zahluke kakhulu - nge Uluhlu lukaAngie iboniswe ngaphezulu kweYelp kunye naMaphepha aMthubi ngeZiphumo zikaGoogle zoShishino ezilawula iphepha:
Ekugqibeleni, safumana amaxabiso entengiso yeYelp. Iindleko bezingathinteli, kwaye zibandakanya ividiyo yesiko eyayiza kuveliswa nguYelp kunye nomthengi. I-rep yasazisa ukuba xa kukho ividiyo, kukho uguquko oluphezulu lwe-7%. Umcimbi namaxabiso yayikukuba wawufuna ikhontrakthi yonyaka. Ukuba uMonique akafumani ziphumo, isohlwayo sokuphuma kwangoko yayiziinyanga ezimbini zentlawulo ukongeza kwiindleko zevidiyo. Ngamanye amagama, kungabiza uMonique amawaka ambalwa eedola ukuba intengiso ayisebenzi.
Sacebisa ukuba uMonique hayi qhubela phambili nentengiso… hayi kuba sicinga ukuba intengiso yeYelp ayinakusebenza, kodwa ngenxa yemfuno yothethathethwano lonyaka. Ukulingwa kweentsuku ezingamashumi amathathu bekuya kuba kuhle ukuvavanya ukuba izinga lokuguqula liza kuqhuba ishishini elitsha ngokwaneleyo ukuba uMonique agcwalise ikhalenda yakhe. Nangona kunjalo, ukuba ayenzanga, imfuneko yemvumelwano yonyaka inokulonakalisa ishishini lakhe elitsha-xa efuna eyona ngeniso.
Ukhe wasebenzisa Intengiso yeYelp? Athini amava akho?
tags: Uluhlu lukaAngieukukhangela kwendawoukhangelo lwasekhayaintengiso yokukhangela yasekhayaReviewsYelpuphononongo lwe-yelp
ThethaPipe: Beka iVoicemail kwiWebhusayithi yakho
Mar 24, 2013 ngo 8:43 PM
Ithegi yentengo enjengaleyo yokusilela kwentengiso iya kwenza nayiphi na ishishini elitsha.
Ngomhla wama-25 ku-Disemba 2017 ngo-8: 29 PM
Kutshanje ndibhalisele iintengiso ze-yelp kwaye bebeza kunditsalela umnxeba ngokuphindaphindiweyo emva kokuba ndibaxelele ukuba andinakuyenza kwaye andikaze ndifumane msebenzi kwaye kwinyanga yokuqala ndiye ndahlawuliswa i-300 + yeedola kwiqela lokucofa kwaye andikaze ndibenabo abathengi akukho bathengi be-yelp ababizelwe ukufumana nexabiso lesaphulelo xa ndirhoxisa intengiso ye-yelp bandibiza i-24 yeedola ngeenkonzo ze-yelp kwaye kufanelekile ukuba babe simahla ishishini le-yelp sisikrelemnqa endinokuvuselela umnxeba xa ndivumela simahla ke xa ndihlawule inyanga yokuqala kwaye andizoyikisanga ukuba intengiselwano ihambe thru bayithatha nje kwiakhawunti yam ngaphandle kokundazisa ukuba bahlawulisile ikhadi lam
Ukwazi ukuba ndisokola kangakanani baqhubeka kwaye benza oku
Mar 24, 2013 ngo 9:53 PM
Ukuba kufuneka ubasayinele abantu unyaka, uya kuba nentembelo encinci kwinto oyithengisayo. Andizukuyichukumisa ngesibonda seenyawo ezilishumi.
Jul 5, 2013 ngo-10: 52 PM
U-Yelp wandixelela ukuba ubuncinci yiminyaka emibini yesivumelwano @ 450 / ngenyanga
Agasti 27, 2013 ngo-2: 58 PM
Ndiyabulela uJim Hart. Into oyithethileyo ibifanelekile kwaye kunye namanye amagqabantshintshi kunye neposti, ngekhe ndibhengeze kunye nabo. Baye bahluza nohlolo kubathengi bam abathembekileyo. Ndingu-acupuncturist kwaye ndinolwazi oluncinci ngemicimbi yeshishini, ke ke ndixhomekeke kuphando ukundinceda ndenze izigqibo zam. Ulungile. Ukuba babenentembelo kwinto abayibonayo, baya kukuvumela ukuba uyizame inyanga. Enkosi kwakhona, uTracy Sturdivant
Mar 25, 2013 ngo-6: 09 AM
Iposti enkulu uDoug. Ndijonge uYelp ngokusondeleyo kubathengi kwaye ndathetha ngokucacileyo kunye nommeli wethu malunga nemigaqo yonyaka kunye nokuba ungakanani umbulali wentengiselwano. Ndiyarhana ukuba siza kubona ezinye iindlela kungekudala, ngakumbi ngezithuba ezinje.
Mar 25, 2013 ngo 2:39 PM
Ulandele ukukhokela kwakho kuGoogle; Ngaphandle kokutya kunye nokusela i-Yelp ayifumaneki kwiirejista nangona amaPhepha aMthubi eqhubeka nokuhla kwawo kuwo onke amacandelo. Kubonakala ngathi kuyasomeleza isikhundla sikaDoug njengeYelp engabhaliswanga kwicandelo lezempilo kwaye uphononongo lwabo lubonisa ukuxhonywa kweYuppies njengabantu babo bodwa.
Epreli 30, 2013 ngo-2: 51 PM
Ndivile inani lamashishini amancinci ekhalaza malunga nokuqiniswa okuqinileyo kweYelp. Umthengisi wentengiso uyakubiza kwaye akunike isandi kwaye ukuba uyala ukubhalisela intengiso yonyaka, uyakuqaphela ukuba amanqaku akho eenkwenkwezi ama-5 awaphindi abonakale kwiphepha labo lasekhaya. Ziyacocwa ngaphandle okanye ezantsi. Oku kwenzeke ngamashishini amancinci ama-6 (ngesiqhelo abantu abayi-1-3) kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo. Kwaye ndawakhangela amaphepha ambalwa (enye apho ndibhalele khona kwaye andafumana uphononongo lwam lweenkwenkwezi ezi-5) kwaye kukho into ebonakala ngathi yihinkey ngaphambili.
Jul 5, 2013 ngo-10: 50 PM
Kuyinyani, yile nto kanye abayenzileyo kum.
Jul 11, 2013 ngo-6: 58 PM
Ndithathe isigqibo sokutyikitya iinyanga ezi-6 ngentlawulo yokupheliswa kwenyanga enye. Ngokwenyani ukongeza kuzise imibuzo emibini kuphela kwinyanga ezi-1. Batsho ukuba kukho isiphumo se-snowball ngeentengiso ozibona ezinye iziphumo ekuhambeni kwexesha. Eyona nto indenza ndicinge ukuba kufanele ukuba kubekho imatriki ebonisa iintengiso zakho kumaxesha angcono umzekelo xa ukhe wakho apho ixesha elide. Ndicinga ukuba ndiza kutya umrhumo wokubulala kwaye ndibeke imali yam endiyishiyileyo kwintengiso ngqo. Sele behluzile ezinye zezona mpendulo zam zichaphazelekayo! Oh Kulungile.
Oktobha 11, 2013 ngo-9: 37 PM
Ndivuya kakhulu ndifumene eli nqaku. Ndithathela ingqalelo intengiso kunye neYelp kodwa ndonqena nokusayina unyaka omnye. Ndinikwe ukhetho lweenyanga ezi-1 ngentlawulo yenyanga e-6, kodwa ukhetho lwevidiyo luyasuswa. I-Yelp inenye inketho ye-PPC engadingi khontrakthi ndixhomekeke kuyo endaweni yoko. Nangona kunjalo, ndixelelwe ukuba ndihamba ne-PPC, andinakho ukubhalisela intengiso kamva ezantsi kwendlela. Ibonakala ingaqhelekanga kum ..
Mar 31, 2014 ngo 9:03 PM
Eyona nkunkuma inkulu yemali eyakhe yenzeka kwishishini lam. Ndifumana amaxesha ali-10 kuninzi lwephepha lam leYelp ngokwasemzimbeni kwaye simahla emva koko ucofe intengiso ehlawulweyo.
Oktobha 22, 2013 ngo-7: 40 PM
Ndithethile ne-Yelp Rep ngale ntsasa nje. Ndineeppa zentsuku ePortland OKANYE ndingumboniso womfazi omnye. Ndacinga ukuba imirhumo yeYelp yayiyinkwenkwezi kwaye ifuna ikhontrakthi yonyaka omnye iphambene. Ngelixa ndingathanda ngokwenene ukubhengeza ngeYelp, andifuni nje ukuhlawula i $ 350 / mo. Amaxabiso kunye nezivumelwano ezahlukeneyo esele zithunyelwe ngumntu wonke zichanekile. Enye into endibuze ngayo yile vidiyo. Nangona besithi bahlawula ividiyo (kunene, siyazi ukuba siyayihlawula). Ukuba ufuna ukusebenzisa ividiyo kwiwebhusayithi yakho yeshishini, kuya kufuneka uthenge ividiyo kumfoti. Ke nangona sihlawulela yona, ayingowethu ukuba siyisebenzise.
Kukho ukhetho lokuhlawula unqakraza, kodwa yi- $ 200 / ngenyanga. kwaye andiqinisekanga ngenene ukuba ungayibeka ikepusi kuyo.
Ewe bathi ekubeni ungaphezulu, lonke ishishini liza ngendlela yakho, ngokuqinisekileyo liqinisekisiwe. Ewe… hayi. Ukuba ngenene bayayicinga loo nto, ngekhe kubekho mfuneko yesivumelwano sonyaka. Ndingathanda ukuhlawula ngokwahlukeneyo ividiyo kunye nokuseta uhlahlo-lwabiwo mali lwam lwenyanga (ukuba unayo isivumelwano) iinyanga ezi-3, inyanga ezi-6, isivumelwano se-1 sonyaka kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluncinci
Uxolo, akukho ntengiso yeYelp kum, okwangoku.
Oktobha 23, 2013 ngo-6: 54 PM
Ndisebenza neshishini elifumana ubuncinci abathengi abatsha abasi-8 ngenyanga ukusuka kwi-yelp. Konke kuxhomekeke!
Mar 31, 2014 ngo 9:02 PM
Kodwa ungaqiniseka njani ukuba abathengi abatsha abasi-8 bavela kwintengiso ehlawulelweyo xa kuthelekiswa noluhlu lwasimahla lweYelp? Awunalo noluvo kuba awukwazi ukwahlula phakathi kweenguqu kwiintengiso ezihlawulelweyo xa kuthelekiswa noluhlu lwamahala.
Mar 31, 2014 ngo 7:28 PM
I-Yelp ifana ngqo ne-mafia. Andinguye umninimzi okhohlisayo ongayaziyo i-CPC kwintengiso esekwe kwintengiso. Igama lam lokuqala leengcebiso: Sukuthengisa naphantsi kwayo nayiphi na imeko ngeYelp. Bangamasela (afana noMtyholi enyanisweni) abafuna nje ukuba utyikitye umgca onamachaphaza ukuze bakubambe ngesivumelwano sabo emva koko baqhubeke nokukunika inkonzo eyoyikisayo. Ndikhalaze kwiintengiso zeYelp zokuba intengiso yabo icofe kuwo onke amaxesha. Impendulo endiyifumeneyo ibifana qho. Umthengisi we-Yelp we-dimwitted undithumelele izibalo malunga nokuba iphepha lam le-yelp lifumana njani inani le-X yeembono, x inani labantu abacofa kwiwebhusayithi yam kwiphepha le-yelp, inani leembono zeselfowuni, kunye nenombolo ye-X yeentengiso zeYelp ezithengisiweyo. Bayasilela ekunxibelelaneni ukuba zonke ezi zibalo zinento encinci yokwenza nentengiso yeYelp ehlawulelweyo. Uninzi lwezi ziziphumo zoluhlu lwephepha lasimahla leYelp. Ngokusisiseko, ukuba ndinezimvo ezingama-300 zasimahla zenyanga zeYelp kwiwebhusayithi yam (Ngokusekwe kumanani ohlalutyo kuGoogle ngaphambi kwentengiso kunye neYelp) emva koko ndifumana amaqhosha angama-40 (gcinani engqondweni oku kukucofa kwiphepha lam leYelp, kungekho Ukuqinisekisa ukuba umthengi onokubakho uya kunditsalela umnxeba okanye abeke iodolo), kutheni le nto intengiso yeYelp iphikisana nezo zibalo ngokungathi ndizifumana ngenxa yentengiso yam ehlawulelwayo ??? Kuba uninzi lwabathengi babo ngabathengi bamashishini amancinci abangazibhengezi kakhulu iintengiso kwaye bazama nje ukubaphambanisa ekubeni bakholelwe ukuba ngaphandle kwentlawulo yeYelp yentengiso konke oku kuyakuhamba.
Aba bantu ngamagcisa obuqhetseba. Ewe, i-Yelp ngumthombo olungileyo weshishini elitsha esona sizathu sokuba ndibhalisele intengiso ehlawulelweyo kwasekuqaleni. Nangona kunjalo, umgca wenyani kukuba iiphakheji zabo zentengiso zikhutshiwe zizonke ezifumana izibonelelo zeYelp kuphela, hayi ezentengiso. Ubusazi? Abantu abathengisayo beYelp abayi kukunika inombolo yabo yefowuni ukuba bafikelele? Awunandlela yakubabiza. Banokukubiza kuphela. Ungabathumela i-imeyile, kodwa abanakuphendula iintsuku. Ke xa ekugqibeleni batsalela umnxeba, kwaye uyiphose ifowuni kuba uyazi ukuba uqhuba ishishini elincinci, awunandlela yakubabuyisela. Oku kunokuqhubeka nokuqhubeka. Kuyabonakala ukuba aba bantu bathengisayo baxakeke kakhulu kangangokuba abanalo ixesha lokuthetha nabantu abazithethelela ngendima yabo, abathengi babo.
Nje ukuba isivumelwano sam sentengiso siphelile, akukho ndlela ndiza kuphinda ndibhalise nabo. Ityala elipheleleyo Namathela kuluhlu lwamahala lweYelp. Isebenza ngcono kakhulu kunentengiso ehlawulelweyo kunye nesimahla.
Epreli 21, 2014 ngo-3: 35 PM
Kulungile. Yelp akukho bueno. Ucebisa ntoni?
Epreli 21, 2014 ngo-4: 58 PM
Ndingacebisa ukuba nephepha kwiYelp, kuFacebook nakuGoogle +… kodwa andiqinisekanga ukuba ndiza kubhengeza kwiYelp xa ndinikwe iimfuno zabo. Ukuba ungumboneleli ngenkonzo kuluhlu luka-Angie, banabaphulaphuli ababaluleke kakhulu phaya kunye nendlela efanelekileyo yokulamla phakathi kwabanikezeli kunye nabathengi.
Meyi 3, 2014 kwi-9: 42 PM
Ngaba ucinga kakhulu ngokusebenzisa iYelp ukufumana abathengi abatsha okanye yenza nje kube lula kubathengi bakho abakhoyo ukufikelela kuwe? Njengomsebenzisi we-Yelp, ndisebenzisa i-Yelp kokubini ukufumanisa okutsha kunye nokujonga iimenyu kunye neenombolo zefowuni kumashishini endisele ndazazi malunga nokuya kuwo. Nangona kunjalo, kufuneka nditsho ukuba andikhe ndicofe intengiso kwaye xa ndibona intengiso, ndicinga ukuba ukuba kufuneka ubhengeze kwiYelp ngoko imveliso yakho ayifanele ukuba ilungile.
Novemba 19, 2014 ngo-2: 36 PM
Andiqinisekanga ukuba oko kunokwenzeka!
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2014 ngo-9: 09 PM
Ngelishwa, unkosikazi wam uvele wenza intengiso yeshishini lokuloba iinwele. U-Yelp ubanga ukuba kukho i-100 ekucofa kwintengiso yakhe kwiiveki ezimbini zokuqala. Sithe akukho ndlela, umfazi wam unayo iselfowuni, ishishini kwaye akukho namnye umnxeba! Unendawo ye-5 ye-Yelp eneengxelo ezintathu ezintle ukuba angafumana njani iifowuni kubantu abanomdla ngokwaneleyo ukuba bacofe kwintengiso yakhe?
Elona candelo linukayo kukuba iYelp ihlawulise i $ 3.50 ngonqakrazo olunye! ,,
Asikaze silindele ukufumana ngaphezulu kokucofa nje kancinci (sicinga ukuba inani lokucofa luBuqhetseba) kunye nepesenti efanelekileyo (10-30%) yabo bacofe ukubiza.
Akukho fowuni ngekhe ibe yinto enkulu kwaye kulindelwe ngandlela ithile, kodwa hayi xa uYelp efuna ukusihlawulisa ngo-100 konqakrazo.
Iqela lenkxaso leYelp licebise ukuba senze uphuculo kwiphepha leYelp kunye nenkcazo yeshishini. Oko akwenzi kwanto ukuchaza i-0% yefowuni yenqanaba lokucofa kwi-100 + ekucofa kuyo.
Sifuna ukuphuma kuYelp ngoku, basixelele ukuba bekufuneka ukuba sirhoxisile ngomhla we-15 wenyanga engaphambili.
Naziphi na iingcebiso zendlela yokusikhupha kunye nendlela esinokulifumana ngayo igama kwabanye abanini bamashishini abancinci ukunqanda iYelp njengesibetho.
Feb 18, 2015 ngo-9: 42 AM
Ukuba banolwazi lweakhawunti yakho yokutshekisha kwaye bazikhupha ngokuzenzekelayo ... .Ndiza kuyicima loo akhawunti ndize ndivule entsha. Xa bekugrogrisa ngamanyathelo asemthethweni… gcina ubungqina beerekhodi zefowuni zakho ukubonisa ubuqhetseba. Yile nto bendiya kuyenza. Ewe ungaphulukana nenkundla yamatyala… .okanye urhoxise kwaye uhlawule isohlwayo. Ndiyamcaphukela uYelp. Singabanini bamashishini kufuneka sizilwele.
Sep 21, 2015 ngo-1: 00 PM
Siyinkampani yokulungisa amanzi kunye nokuvunda kwaye siyabhengeza ngeYelp. Akukho ziphumo zintle kunye nekhontrakthi yonyaka omnye. Ngaphezulu koko, bazisusile ezinye zeempendulo zethu ezilungileyo kunye nokuzithethelela kunokuba kunokuba zizinto ezingezizo. Musa ukucebisa ukuba uchithe imali yakho kunye nabo.
Nov 2, 2015 kwi-11: 15 AM
Olu lulwazi olukhulu. Ndinengxaki efanayo kwincwadi yobuso. Abayihoyanga kwaphela.
Feb 4, 2016 ngo-12: 13 PM
Nam ndineshishini elincinci, bendineenkwenkwezi ezintlanu, ibingumthengi endimsebenzeleyo, kwaye ebengandazi okanye enalo naluphi na uhlobo lonxibelelwano nam oluya kuguqula uluvo lwakhe, olunokubangela ukuba anike ukurhafiswa
Wayeyithatha ngokwakhe ukuba andinike uphononongo oluhle kakhulu. Ucacise izizathu ezithile zoluvo lwakhe kwaye wayenolwazi ngecandelo lomsebenzi. Akukho nto kuhlaziyo eya kubonakala ukuba ayiyonto ngaphandle koluvo olungenamkhethe.
Emva kokuba intengiso ye-yelp izame ukundithengisa kwinkqubo ehlawulelweyo, ndala ngokuzithoba amaxesha amaninzi kwiifowuni ezininzi zentengiso.
Emva kokuncipha kwenkwenkwezi yam emihlanu yanyamalala. Kwakukho ngoku kwicandelo elingacetyiswayo. Wayenguye kuphela ukuhlaziywa kwam. Ndiqhakamshelane no-yelp ndachaza imeko yam ukuba igama elithi "akucebisi" likhokelela gwenxa kwaye kamsinya nje ukuba umthengi onokubakho abone eli gama "lingacetyiswanga" bayakukholelwa ukuba luphononongo olubi kwaye ishishini alikhuthazwa kwaye liqhubeke.
Emva kokuchaza ityala lam khange ndicinge ukuba kuya kwenzeka nantoni na ndiyavuya ukubona ukuba baphinde bathumela uphononongo lokulinganiswa kweenkwenkwezi ezintlanu.
Kungekudala emva kokuba bezamile ukundithengisela inkqubo ehlawulelweyo kwakhona, ndaphinda ndala. Emva koko qagela ukuba yintoni, inqanaba lam leenkwenkwezi ezintlanu liphinde lathathwa kwakhona.
Ngeli xesha ndiza kucela abathengi ukuba bandihlole. Abanye babonakala beqinisekile ukuba bazakuthatha ixesha lokuphonononga. Alukho olunye uphononongo oluye lwaboniswa kwiphepha lam kwakhona. Ekugqibeleni ndabona ukuba uphononongo alwenzi ukuba lube kwiphepha. Ke ngoku andiyichazanga i-yelp kubathengi.
Isibhakabhaka simone ukufota
Mar 23, 2016 ngo 1:55 PM
O nyhani? Ndineefowuni eziphezulu ezivela kubo izolo. Baye banditsalela umnxeba ngokuphindaphindiweyo de ndavuma iinyanga ezi-3 ngentloko yeedola ezingama-325- ndinexhala lokuba ndingabhalisela ntoni ngoku.
Iliwa eliqinileyo leWebhu yeWebhu
Mar 30, 2016 ngo 3:51 PM
Bendicinga ngokuthengisa kunye nabo, kodwa abameli babo baqhubeka banditsalela umnxeba yonke imihla kangangeenyanga endizifumene zingaqhelekanga kwaye zityhala kakhulu.
Epreli 6, 2016 ngo-11: 14 PM
Epreli 7, 2016 ngo-9: 34 AM
Musa, njengoko abanye besitsho, Yazisa ngeYelp!
Bathetha nantoni na ukuze ubhalise emva koko ungaze ufumane mpendulo!
Bayakuthintela ekwenzeni utshintsho kuludwe lwakho lwasimahla kwiYelp!
Baye bahlawulisa iakhawunti yam ngaphandle kwemvume yam emva kokuba bandiqinisekisile kaninzi ukuba ngekhe!
Ndifumene iifowuni ezininzi ezivela kubantu abathengisayo abathi ndibone ukuba ndiyathengisa kwiYelp kwaye ndifuna ukubona ukuba ndingazama intengiso nenkampani yabo, okanye ndisebenzise inkampani yabo ngeSEO ..
oku kungqina ukuba i-Yelp ayikubekeli esweni ukucofa kwaye iqinisekisa ukuba ndihlawula kuphela abantu abafuna kwaye banomdla wokusebenzisa inkonzo yam njengoko besitsho! !!
Iyonke inkampani b / s!
Andizange ndiyamkele intengiso yam ngaphambi kokuba bayipapashe
banemifanekiso engahleliwe kuyo endaweni yelogo yam
Abazange bandithumele ityala lokuhlawula ngaphakathi kweentsuku ezingama-30, bahlawulisa usuku lwam lwebhanki 1 !!!!
(Zonke izinto bexoka ngazo)
Ndathetha nomphathi, wathi "ngokuqinisekileyo, siza kulwenza olu tshintsho lwenziwe kwiakhawunti yakho" (izinto ezi-5 ebezingalunganga, kubandakanya nendawo endisebenza kuyo) "sifuna ukuba wonwabe ngenkonzo oyifumanayo. ”
..kwelo xesha ndambuza ukuba loluphi utshintsho azakube esenza (phambi kokuba aphume emnxebeni, efuna ukuqinisekisa ukuba uyayiqonda) Akanakho ukubiza into ENYE ESINGAMODWA esixoxe ngayo!
wayengeva nokumamela! Ndacinga ukuba ndimvile ethetha ngasemva (kutheni ndimcele ukuba aphindaphinde izinto kum)
BALEKA! lo mfo "uyimbonakalo yobudenge"
ngoyena mntu uqeqesha ezi ziDemon zoBugqwetha!
SUKUTHENGISA ngale nkampani inomthunzi!
Bandihlawulise i-375 yeedola kwaye ndafumana kuphela iifowuni ezili-16 zokuthengisa malunga newebhusayithi yam, akukho namnye umnxeba ovela kumthengi onokubakho! nabo bakhuphisana nabo abazijongi kwaye banokucofa intengiso yakho!
Ngoku zonke izibuyekezo ezintlanu zeenkwenkwezi zisusile ENKOSI YELU!
Epreli 19, 2016 ngo-5: 35 PM
Enkosi ngeziphakamiso-bendicinga ngesibhengezo sentengiso esihlawulelwayo, uhlawule ixesha elingakanani ngentengiso? Ndingabuza, utyale malini kuyo?
Epreli 25, 2016 ngo-9: 28 AM
Ishishini lethu likwanazo uphononongo olwahlukeneyo kubandakanya ukubonwa kweenkwenkwezi enye ukuya kwezihlanu. Uphengululo lwenkwenkwezi olunye ngokucacileyo lwalubhalwe ngumntu ongalinganiyo owayethetha rhabaxa kwaye engakhange alityelele ngokwenyani ishishini lethu kwaye loo mithathu ingamashumi amahlanu yayivela kubathengi.
Ndalile ngentlonelo iifowuni zentengiso (ezininzi kwiiveki ezimbalwa), kwaye uphononongo lweenkwenkwezi ezine kunye ezintlanu lwalufihliwe, kushiya kuphela inkqubela enye. Babanga ukuba basusa uphononongo olungekho semthethweni, nangona kunjalo uphononongo lwenkwenkwezi olunye lunikezwe ngumbuyekezi enolu vavanyo lunye kuphela, ngelixa omnye wabahlanu wayevela kumvavanyi kunye nohlolo oluninzi kwiprofayile yabo.
Baxoka kwaye bangamasela kwi-yelp. Andinakuze ndibahlawule neesenti, kwaye ndingaze ndibasebenzise njengomthengi ukukhangela iivenkile zasekhaya nokuba. Ndivota ngamandla am abathengi - nceda ungaze usebenzise loo ndawo! Okukhona abantu bephepha ukuyindwendwela, kokukhona baya kufumana umbono omncinci, kwaye ngethemba lokuba baya kuphuma kwishishini.
Epreli 25, 2016 ngo-10: 59 AM
Ke ndayijonga kwaye inkwenkwezi enye yayinyani. Kulungile, sikushishino apho inkwenkwezi enye iqhelekileyo. nangona uphononongo lwenye yeenkwenkwezi lwalusemthethweni, yayisothusa nyani into yokuba i-yelp ikhethe kuphela ukuba igcinwe, ngelixa isusa uphononongo oluphezulu emva kokuba sithe "hayi" kwiintengiso ezihlawulelweyo. Yelp yuck.
Epreli 25, 2016 ngo-7: 30 PM
Amava angakholelekiyo ngeentengiso ze-yelp, awuzange ucinge ukuba uphawu olu lukhulu kunokuba sisikhwabanisi. Bayakutshixa kwisivumelwano seminyaka, njengoko uninzi luchaziwe apha, ulibale malunga nendlela ezenziwa ngayo iintengiso okanye ezokulandela emva kokuba zikufikisile.
Amaqhinga okuthengisa angacacanga, izithembiso ezingeyonyani, akukho nto ngaphandle kobuqhetseba!
Itekhnoloji yabo ye-PPC ikwanokuthandabuza kakhulu, bafumana iifowuni zeenkonzo ezingadibaniyo kunye neenkcukacha-manani ababenazo zazingachanekanga kwaphela.
Xa bebuzwa malunga nokuba kutheni iifowuni zingena zingahambelani neshishini, bayatsho ukuba ishishini likudidi oluthile kwaye undwendwe olungena kolo didi lubona intengiso, engqina ukuba bafuna nje ukucofa kwaye bangakhathali ukubonisa intengiso umxhasi okhangela inkonzo yakho.
Ukunganyaniseki kakhulu, musa ukuwela emgibeni, hlala kude!
Meyi 11, 2016 kwi-3: 17 PM
Vumelana, wenze okufanayo kum, uthathe zonke iinkwenkwezi zam ezintlanu kuba ndingafuni ukusayina nazo, kufuneka senze ntoni? Ubuqhetseba.
Meyi 25, 2016 kwi-2: 26 AM
Iyonke inkcitho yemali endiyicebisayo ukuba wonke umntu abeke igama lokuba aba bantu abazi ukuba benza ntoni kwaye ndicinga ukuba banabasebenzi cofa kwiintengiso ukuze basebenzise intengiso yeedola. Uluhlu lweCraigs lundifumene kalikhulu impendulo kwinto engakanani? Yilinde?… .Ngoba akukho nto ebangela ukuba uluhlu lweentengiso zeCraigs zisimahla. Aba bantu bangamasela alula kwaye alula.
Meyi 29, 2016 kwi-1: 01 AM
Ndinamava amabi ngeentengiso ze-yelp. Ziyabiza. Uvalelwe kwisivumelwano ekufuneka uhlawule kakhulu ukuphelisa kwangoko. Khange ndifumane ziphumo zilungileyo kule ntengiso. Nceda sukuyenza impazamo endiyenzileyo. Chitha iidola zakho zentengiso kwenye indawo.
Juni 3, 2016 ngo-6: 51 PM
Ndiye ndaya le. Intlungu eziNtlungu…. kwaye ndiyingcali ye-PR / yeNtengiso. Ndiyilungisa kakhulu indlela uElaine avakalelwa ngayo. Inqanaba elithi "nqakraza ngentengiso nganye" lithe kratya kokungcono- kunye nentengiso endixelela ukuba ingangama- $ 5- $ 10 kuxhomekeke kubakhuphiswano (ezinye i-peeps w / biz ezifanayo ziyayiqhuba) xa yayinjalo malunga ne- $ 18 / cofa . Kwisithuba esingaphezulu kweenyanga ezi-3 AKUKHO MNYE uguquko. Ialgorithms zazo zifuna utyikityo olunzima- i-Yelp iya kuhambisa intengiso yethu xa abantu bekhangela iinkonzo ezingadibaniyo. Akumangalisi ukuba imunce…. ngubani ofuna intengiso athi "indawo yokubhaka" xa bekhangele "ibha".
Ukuba ndingayifumana kunye ndinokumangalela ngobuqhetseba…. imbi kakhulu.
Juni 24, 2016 ngo-1: 29 PM
Ndityikitye i-yelp kwaye ekuphela kwendlela abandinike yona sisivumelwano sonyaka esi-1. Emva kweenyanga ezi-6, ndandidiniwe kukuhlawula i-375 yeedola ngenyanga nangona ndandingafumani baxhasi batsha kubo. Ndiye ndazama ukurhoxisa inyanga. Batsho ukuba kufuneka ndinike isaziso seentsuku ezingama-30 kwaye ndihlawule imali eyi-700 yokuphelisa kwangoko. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kuya kwenzeka ntoni xa ndingavumi ukuhlawula?
Juni 30, 2016 ngo-3: 30 AM
Ndingumnini weshishini elincinci. Kutshanje ndiyirhoxisile ikhontrakthi yam kunye ne-yelp. Ayikuko nje ukungasebenzi kakuhle kwemali esiyihlawuleleyo, kodwa baxhobisa ngaphezulu komthengi. Umboleki uhlala engaziwa, ubhala uphononongo olubi malunga neshishini lakho, kungekho bungqina. Oko kuvumela abo bakhuphisana nabo ukuba babhale iimpazamo ezingezizo / ezingalunganga ezingachazwanga, kwaye bonakalise igama lakho kwishishini. Ke uYelp ufuna ukuba ndihlawule i-540 yeedola ngenyanga ngaloo nto ?! Ndide ndaba nomthengi osinika uphononongo lweenkwenkwezi ezi-1, kuba sasibhukishwe, kwaye sasingenobuchwephesha obufumanekayo kuye ngelo xesha (10:30 pm). Khange sibenzele msebenzi, sinembeko, siphambili kwaye sinyanisekile. Kodwa ndifumene uphononongo lwenkwenkwezi e-1 kuba besixakekile! Yelp wala ukuyisusa.
Jul 5, 2016 ngo-8: 22 AM
Ungazenzela ngokwakho iintengiso kwiqonga leYelp nakweyiphi na ishedyuli oyithandayo. Kuphela kuxa ubhukisha ikhontrakthi ne-Yelp apho ukuzibophelela konyaka kunqakraza khona.
Ngena kwi Biz.yelp.com njengomnini weshishini kwaye unokuvula iintengiso kulo naliphi na ixesha okanye ixesha. Awuyifumani ividiyo kodwa ungazivavanya iintengiso. Sizisebenzisela abathengi.
Jul 25, 2016 ngo-9: 20 AM
Siziwe - Enkosi ngokuthumela. Ngaba uyakwazi ukundinika ukujongwa okunzulu / ukuqonda kokuzenzela kwezentengiso vs "izivumelwano zokubhukisha"?
UMalcolm Ruthven UMalcolm
Sep 27, 2016 ngo-2: 29 PM
Ngokuchasene nesigqibo sam esingcono, ndityikitye neYelp kwiphulo lentengiso lokubaleka ubuncinci iinyanga ezintathu, intengiso enkulu ixabisa i $ 1,000 ngenyanga, nge- $ 700 yokurhoxa kwangoko. Ishishini lam ngumthetho wokungabinamali. Ndiligqwetha / ligqwetha lokungabinamali, musa ukwenza naluphi na olunye uhlobo lomthetho, kwaye uYelp wayeyazi loo nto. Kungekudala emva kokuba ndifumene ukuba baqhuba intengiso yam (endandiyihlawula ngokucofa kuyo) yokukhangela "umthetho wokuqesha" kunye "nokuprinta iminwe ngokuskena". Andenzi oku!
Ngenxa yenkonzo yentengiso ephosakeleyo kakhulu, ndazise uYelp kwaye ndayirhoxisa inkonzo. Baqhubekile kwaye bandibiza imali ngokuchofoza kwintengiso kwiinyanga ezimbini ezisele ($ 575 kunye ne- $ 1,000) kunye nemali yokurhoxisa eyi- $ 700.
Ndiziphikisile zontathu izityholo nenkampani yam yamakhadi etyala. Intlawulo ye- # 1 ($ 575) isonjululwe ngokupheleleyo endaweni yam. Intlawulo # 2 ($ 1,000) isaqhubeka. Intlawulo engu- # 3 (umrhumo wokupheliswa kwe- $ 700) kugqitywe kwelungelo likaYelp kuba “ibikwisivumelwano”! Ngaba ndiza kuthatha ixesha kunye nengxaki ukuyimangalela? Akuthandabuzeki.
Oktobha 25, 2016 ngo-8: 40 PM
I-Yelp yeyona nkampani imbi kakhulu endakha ndasebenza nayo. Unqakrazo lokucoca olupheleleyo. Ndibafumene belahlekisa kwaye kufuneka ndisebenze ukuze ndifumanise malunga nemirhumo yokurhoxisa. Ngombulelo ndinekhontrakthi yeenyanga ezintathu kuphela. Ndisebenza neenkampani ezininzi ezikwi-intanethi kwaye abafezekanga, kodwa nguYelp kuphela andimthembi.
Nov 3, 2016 kwi-12: 31 AM
Ndinendoda enye (mna) yokulungisa indawo yokucima umlilo, i-Yelp rep yayintle kakhulu kwaye yayiqhubeka ngokuzama ukuba ndibhalise. Ndamxelela qho xa sithetha into endiyifunayo. Ukuba abantu bakhangela "ukulungiswa kwendawo yokucima umlilo kunye nesixeko" Ndiyabona ukuba i-yelp ithi "Eyona ndawo ilungileyo yokulungisa umlilo eRenton, WA-Yelp" kwaye ihlala ikwiphepha lokuqala. Ndabaxelela ukuba ndiyakuhlawula ndiza kubala kwiphepha lokuqala nje ukuba bacofe indawo yeYelp, ndaxelelwa ukuba ndiza kuyenza. Ngaba ndenze uphando izolo ebusuku, ndicofe iYelp, xa ndifika kwiphepha le-9 apho bendikho, ishishini elingama-80 + kamva, ndize ndaza emva komfana kunye neBiz yakhe ebizwa ngokuba yiHoney-do Handyman, ndiqinisekile ukuba ungumfo omkhulu kodwa ngokwenene? Ndigxininisa ekulungisweni kweziko kwaye umntu ophetheyo uyandibetha kwiziphumo? Ndabizwa ukuba ndirhoxise kwaye ndafumana ibali elifanayo njengabanye abantu endikhe ndafunda ngabo kule ndawo, ngokuqinisekileyo ndinqwenela ukuba ngendikhe ndayifunda le nto ngaphambili. Ndivele ndarhoxisa ikhadi lam letyala ngoko ke ndiyathemba ukunqanda i-2 yenyanga ye-BS engakhange ikhankanywe xa bendisayinela, kwaye ndathi ndiza kuyinika iinyanga ezimbalwa kwaye ndibone ukuba ndiyafuna ukuqhubeka. Akukho ndlela ndinokuthi ndityikitye nekhontrakthi, ngekhe ndiyenze icace ngakumbi kwintengiso. Ndazi ngcono kodwa ndathengiswa kunjalo. Ndaphinda ndalibala ukuthembela emathunjini am, ndayijongana nayo, yinkampani yokulinganisa ethi "non-biast" (sp) ecela inkampani yongeze iidola, Molo !!!!!!!! Okubi kwam…….
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2016 ngo-2: 00 PM
Ndiyavuya ukuyibona le ngxoxo, ndinqwenela ukuba ndiyijonge PHAMBI kokuba ndityikitye ngenkqubo yeNtengiso yeYelp. Siyakholelwa ukuba obu bubuqhetseba obupheleleyo. Emva kwenyanga yokuqala ndanikwa uhlalutyo kunye nomthetho osayilwayo obonisa inqwaba yeminxeba endiyaziyo ukuba asikaze siyifumane: Ndilandele ngononophelo iilogo zethu ze-ID kunye ne-75% yeminxeba abathi siyifumene ayenzekanga (umhla / ixesha / umnxeba. Inani alibhalisanga) kwaye uninzi luthi akukho mpendulo, akunakwenzeka. SIYE sabona into enkulu kwifowuni yokucela inkunkuma kwaye uninzi lwezi ziye zahambelana neefowuni zethu zokufowuna. Ngesi sizathu asikholelwa ngokupheleleyo kumanani abo kumakhulu konqakrazo ekucingelwa ukuba sifikelele kuluhlu lwentengiso. Sineefowuni ze-ZERO ezivela ebantwini besithi babone i-Yelp Ad kunye ne-ZERO ye-oda yomthengi. Ngenxa yomgaqo-nkqubo wabo wokurhoxisa sigqibe ukukhutshwa phantse i-1400 yeedola ukuze siphume kobuqhetseba. Eyona ndlela ilula yokujonga oku kukuba abanakho ukubonelela NABuphi na ubungqina bokucofa abathi bakwenzela ishishini lakho, yiyo loo nto bebeka isiseko sokuhlawula. Lumka, ulumke, ulumke, asinakuze ndicebise ukuba iiNtengiso zeYelp ziyekwe nakubani na.
Jan 25, 2017 ngo-12: 35 PM
Imveliso yentengiso embi kakhulu! Uchithe ngaphezulu kwe- $ 2000 kwaye akafumananga khokelo. Emva koko irhoxisiwe kwaye yahlawuliswa i $ 700. Ngaba awunakucebisa nakubani na, nangaliphi na ixesha. Gcwalisa i-ripoff !! Ndiceliwe ukuba ndithethe nomntu malunga nayo kwaye andizange ndibuyisele iifowuni okanye i-imeyile
Epreli 27, 2017 ngo-10: 36 PM
Musa ukuba nomsindo, phindezela.
Inombolo yokuqala yokutsala ishishini kwiYELP ayizontengiso. Ukuphononongwa.
Kungenxa yoko le nto siphuhlise u "Y" wokuxhasa uhlaziyo-nto leyo eyenza ukuba kube lula kubantu ukuba bakushiye uphononongo. -Zonke ngeqhezu leendleko zenyanga enye yentengiso, fumana uphononongo lonyaka. Ukuphonononga kwakhona kunamathela ngonaphakade. Nxibelelana ne-5StarMarketingSoftware ngendlela engcono yokwakha ishishini kwiYelp.
Juni 1, 2017 ngo-6: 31 PM
Ndityikitye kuvavanyo lwasimahla kunye ne-yelp, ndirhoxisile emva kweveki enye kuba ndingakhange ndizifumane izikhokelo ezifanelekileyo, kwaye bahlawulise ikhadi lam $ 450 kwiinyanga ezimbini emva koko, besithi khange ndirhoxise. Bathe bekufanele ukuba ndifumene i-imeyile yokurhoxisa kubo ukuba ndiye ndarhoxisa, ethi kwakhona kuba andizukuphikisana nenkqubo yabo. Ndithethile nesebe labo lamatyala, abathe abayi kubuyisa mali kwi-akhawunti yam kwaye bangayicima namhlanje… Oku kubonakala ngathi kubalwe kakhulu. Ndikhawuleze ndafowunela inkampani yam yamakhadi etyala kwaye ndawenza ukuba aphikisane nesityholo. Xa nditsalela umnxeba kubuyela ukuthetha nomphathi, bebengaphenduli kuba besithi ibiyinyanga yokuqala kwaye bebesindwa yimicimbi yokuhlawula. Ndiyakucinga! Khange ndifumane i-invoice, i-imeyile okanye isaziso sokuba ndiza kuhlawulwa ngeli xesha, baqhuba nje ikhadi lam. UGoogle noFacebook basoloko bethumela uhlaziyo kuwe ngelixa lentengiso. I-Yelp ibonakala ngathi ayenzi kakuhle, kwaye le yinzame engaphumelelanga yokuqokelela ingeniso kwiindleko zabathengi. Andonwabanga kukusilela kwabo ukulungisa imeko, okanye inkonzo yabo yabathengi. SUKUTHINTSHA UKUZE UBHALISELE ISILINGO SASESIMA SASIMAHLA! YINKOZO